Ganacsato iyo waxgaradka soo jeeda Somaliland oo rajo xumo ka muujiyay siidaynta markabka MV Laila. – Radio Daljir
Bosaso, Apr 09 -Ganacsato iyo waxgarad kasoo jeeda deegaanada Somaliland oo u kiraysan markabka MV- Laila oo ay kooxo burcadbadeed ahi ay afduub ugu haystaan xeebaha degmada Xaafuun ee gobolka Karkaaar ayaa rajjo xumo ka muujiyay siidaynta markabka oo ay dadaalo badan ay ugu jireen in muddo ah.
Suldaan Caydaruus Xaaji Saalax oo ka mid ah issimada Somaliland ee siidaynta markabka u yimid magaalada Boosaaso ayaa waxaa uu sheegay inaysan jirin wax natiijo ah oo kasoo baxday siidaynta markabka.
Waxaa uu tilmaamay inaysan xiligaan jirin wax is afgarad ah oo lagu siidaynayo markabka oo la gaaray tan iyo markii ay ergadooda yimaadeen magaalada Boosaaso.
Suldaanka ayaa waxaa uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay ka qaybqaataan siidaynta markabka.
Markabka MV-leila oo laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta ayaa waxaa uu ku jiraa gacanta kooxaha burcadbadeeda inka badan sadex bilood.
Markabka ayaa waxaa saaran raashiin iyo gaadiid uu u waday dekedda magaalada Berbera.